Weerar Dhabba Gal Ah Oo Ciidamada Itoobiya Ku Qabsaday Duleedka Degmada Garbahaarey Ee Gobolka Gedo.
Saturday August 12, 2017 - 11:44:51 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaano ku dhow magaalada Garbahaarey.
sawir hore askari Itoobiyaan ah oo lagu dilay gobolka Bay
Xoogaga Katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa Weerar Jidgal ah u dhigay Kolonyo ciidamo Axmaaro ah oo ku socdaalayay wadada xiriirisa degmooyinka Luuq iyo Garbahaarey.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen qaraxyo iyo rasaas xooggan xilligii dagaalku socday.
Ciidamada Itoobiyaanka ah ee weerarku qabsaday ayaa kasoo baxay degmada Luuq waxayna kusii jeedeen dhanka magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo, halkaas oo sanado xiriir ah ay ku wajahayaan go'doomin adag oo ay kala kulmeen Xarakada Al Shabaab.
Weerarkan dhabagal ah ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Qurac Siin oo u dhexeeya Luuq iyo Garbahaarray, waxaana lagu soo warramayaa in uu jiro khasaare soo gaaray ciidamada Itoobiyaanka, inkastoo aanan cadad rasmi ah laga haynin khasaaraha ka dhashay weerarka.
Jugta madaafiicda garbaha laga gemo oo xoogaga Al Shabaab ay u adeegsanayeen dagaalka ayaa laga maqlayay dhulka howdka ah ee kala qeybiya Luuq iyo Garbahaareey.
Ciidamada Itoobiya ayaa isbuucii lasoo dhaafay ka amba baxay magaalada Baydhabo waxayna sahay udaabuleen magaalooyin ay kamid yihiin Qansaxdheere,Diinsoor iyo Garbahaarey, dhammaan kolonyada Xabashida ayaa la kulmay weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo.
AMISOM iyo Itoobiya ayaa dagaal xooggan ugala sidii ciidamadooda ku sugan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ay sahay ugu gudbin lahaayeen waxayna gabeen weeraradii ay ku qaadayeen xarakada Al Shabaab, weerar daba yaaqadii bishii July 2017 ka dhacay duleedka deegaanka Golweyne ee Sh/Hoose ayaa lagu dilay ku dhowaad 41 askari Yugaandheys ah.